Uma ubhekana ezihlukahlukene izindawo, kufanele sinake Tunisia. iholide abahlukile ongenakulibaleka kungenziwa wachitha endaweni ezimangalisayo ehhotela eziyinkimbinkimbi Kheops Ihhotela 4 *. Lapha uzothola ulwandle amahle, izwe elihle kwamanzi, ezingwini ahlanzekile, uhlelo ulwazi uhambo kanye namathafa omangalisayo. mahamba-nendlwana ukusiza ngamunye uzothola extravaganza eyingqayizivele nemizwa nemizwelo, izobamba isikhathi zalo ezinhle. Ihhotela kuthokozise holidaymakers nasezingeni eliphezulu of service futhi wobungane.
Lapha kuba - Tunisia
Tunisia - izwe elincane etholakala engxenyeni esenyakatho-Afrika. Iningi labantu uhlala ogwini Mediterranean. Ingxenye eseningizimu yezwe kungenziwa ngokuthi cishe eyihlane. Labantu main - Arabhu - banobungane bonke izivakashi.
Ningakholwa yizo labo abathi e Tunisia akukho ukubukela. Kuthiwa yilabo yizivakashi ezibuka amazwe, wachitha sonke isikhathi sakhe esikhululekile ogwini futhi lazy kakhulu ukuba amukele izinto ezweni. Lapha iyagcinwa neColosseum, okuyinto enkulu kunazo zonke yesibili elilandela iRoma. Ngeke nje kuphela ukubona, kodwa futhi afeze inqamule izindima komhlaba, amahholo, eyayinekheli nezilo zasendle.
Engxenyeni sezintaba Tunisia uye wakwazi ukulondoloza ubunjalo bayo futhi esikhundleni Matmata, lapho besahlala khona abantu bomdabu ngempela - the Berbers. Zihlala emihumeni engathandi kuphela ukubonisa izivakashi yokuhlala, kodwa futhi ukubaphatha itiye eliluhlaza, kuphekwe ngokusho zokupheka zendawo. Angeke sacabanga eCarthage, lapho njalo ezivezwa kumbiwa futhi abaningi ziphephile entsha, ubuyise emashalofini iminyuziyamu. ungubani yazo yalondoloza futhi enhle ngasolwandle resort of Nabeul, lapho ihhotela itholakala Kheops 4 *. Ngaphambi kokuqhubeka incazelo ehhotela, ngifuna ukukhuluma kancane mayelana edolobheni, ukususa konke ukungabaza mayelana ukuzijabulisa kule eziyinkimbinkimbi ehhotela.
Owabe eNeyapholi - Nabeul kuyona
Uma uya eholidini e Nabeul, uzothola enhle ngasolwandle resort, maphakathi umkhakha zobumba. Ngaphambi esiteshini sesitimela efakwe uphawu yayo - a crock omkhulu. Plus kulo lonke idolobha avulekele isikhumbuzo izitolo, lapho amaholide uzokwazi ukuthenga amakhosi imikhiqizo nabelskih, ezenziwe ngobumba futhi wambozwa kaolinskoy azure okwesibhakabhaka. Ethandwa kakhulu yiwona izitolo emgwaqweni Sidi Barket.
Phezulu Cape Bon ungubani babo waqhubeka emzaneni El-internet Hawari. Kukhona emihumeni olunothile lapho bendawo ukuhlela ukuzingela Falcons Sparrowhawk.
Indawo engcono ukuthenga ubhekwa emakethe Souk al-Juma, lapho ungakwazi ukuthenga konke kusuka imidwebo, lesikhumba izimpahla namakha ziphethe ezihlukahlukene izinongo kanye izithelo ezingavamile.
Zonke amahhotela zitholakala kumugqa ugu. Iyathinteka futhi Kheops Ihhotela 4 *. Kuyinto ngalesi eziyinkimbinkimbi ehhotela, sase uzoyeka ukunakwa kwakho.
Kheops 4 * futhi Les Pyramides 3 * bakha ihhotela eziyinkimbinkimbi olulodwa esisogwini ngasebhishi. It iseningizimu enyakatho emzini Hammamet, eduze nendawo Nabeul, amamitha 600 nje kude. A ibanga elincane nokuphila ebusuku budonsa labo uthanda iholidi ethule, futhi imikhaya eminingi nezingane. Kusukela emzini Hammamet complex ahlukaniswe ibanga amakhilomitha 10, izikhathi 10 ibanga kuwo umuzi Monastir. Duzane kukhona amahhotela eminingi, okuyinto yokwelula lonke string Ugu lolwandle. Eliseduze kukhona "Omar Khayyam" futhi "Nabeul".
Lapho ekhetha ihhotela ngokuvamile kakhulu nokungalungile, njengoba kukhona ihhotela elinegama elifanayo, itholakala edolobheni eliseduze (Hammamet) - Kheops Aqua 4 *. Kuba yisikhathi futhi lapho ihhotela emangalisayo, futhi itholakala eduze, kodwa isikhungo ehluke ngokuphelele.
Ukuze ngifike kuleyo eziyinkimbinkimbi ehhotela akuthathi kakhulu. Okokuqala udinga ukuthola ku Tunisia uqobo. Nabeul (Kheops 4 * itholakala khona lapha) ingamakhilomitha angu-76 ukusuka ngamazwe Tunis-iCarthage sezindiza. Engafinyelelwa ngesitimela, ukuthatha ithikithi esiteshini Gare de Nabeul, futhi phambili kwezokuthuthwa komphakathi ukufinyelela eseduze umnyango stop okuyinto 1 ikhilomitha ukusuka eziyinkimbinkimbi ehhotela. Uma isabelo salowo owasala nempahla incane, ungakwazi ukuhamba ngezinyawo, futhi uma isisindo kuyaphawuleka, kungcono ukuthatha itekisi. Indlela ukufika kulo ayibizi. Ngokwesibonelo, i-$ 3 ungathola kusukela komunye umkhawulo edolobheni komunye.
Incazelo jikelele ihhotela
Phakathi amahhotela elisedolobheni, Kheops 4 * (Tunisia) ezijatshulelwa yizivakashi ethandwa kakhulu. Leli hhotela oncomekayo kahle i iholide ukonga endaweni ukhululekile. I indima ebalulekile eyadlalwa budebuduze ogwini ngumgogodla nomuzi izivakashi ukuze uphumule imikhakha ehlukahlukene ubudala.
Ihhotela yakhiwe ngesikhwama izindlu eziyisithupha storey, okuyinto liphuma ngumgogodla ezikhungweni zomsebenzi eziyinkimbinkimbi ehhotela. Zonke amakamelo isivakashi babe nenhle, ukubhaliswa design esiyingqayizivele. Zonke amakamelo isici ifenisha ukhululekile. Ukuze kube lula izimenywa isakhiwo has ikheshi. Ngaphambi emnyango kuyinto ithala. Kusukela Bungalows at Les Pyramides ehhotela ehlukanisa ezisawolintshi engadini udabule ezokwenza athokozise nesivakashi olindele kunazo. izivakashi sabo sokuqala othumele ngo-1989 futhi kusukela ngaleso sikhathi ayilokothi iyeke ukujabulisa izivakashi.
Ukuze labo abeza eholidini eTunisia, Kheops 4 izinkanyezi Ihhotela likuvumela 319 amakamelo yokuhlala anemisila emaphakathi air conditioning. Leli hhotela has ezimbili kuphela amakamelo: ejwayelekile, umndeni. ongakhetha Indawo kungaba ezahlukene - esuka kubantu 1 kuya ku-3. Ethandwa kakhulu standard amakamelo, ehlanganisa main egumbini lokuphumula futhi yokugezela.
Amafulethi igqamile futhi ngempela ivulekile, ahlotshiswe ezithambile ukukhanya imibala. ifenisha Ukhululekile ivumela izivakashi ukuzizwa imfudumalo ukududuza esivela esigabeni amahhotela efanele. Zonke amakamelo TV satellite, bamletha inombolo yocingo lapho ungakwazi oda iyiphi isevisi ngqo efulethini. Kukhona mini-efrijini. Indlu yangasese has ngigeza futhi okugeza, WC, zokugeza kubalulekile, a ijazana lasebusuku, ithawula kanye dryer izinwele.
Igumbi ngalinye has a emphemeni nge umbono omangalisayo yezithelo ezisawolintshi nolwandle bluish ngemva kwaso. Amakamelo agcinwa ehlanzekile, okuyinto bahlanza nsuku zonke njalo. Nsuku zonke kwenziwa kanye amathawula.
Ngokungafani amahhotela afanayo emhlabeni nge esigabeni 4 amahhotela * e Tunisia, ngaphezu cuisine European, linikeza abaningi izinqumo amakhono okulungiselelwe zokupheka Arab. Kuyinto ayihlukile neze futhi Kheops 4 * (Nabeul). Ukuze izivakashi zayo inikeza ukukhetha ezimbili zama-amandla: HB (ibhulakufesi kanye dinner) nazo zonke okufakayo ( "zonke okufakayo"). Ukudla kwasekuseni kanye dinner asizwa yokudlela lomcoka lezitsha style. It unikeza ezihlukahlukene izitsha, phakathi kwazo ezingama ezintathu izinhlobo inyama izitsha, kwasolwandle. izivakashi Happy futhi ukhetho olukhulu izithelo nemifino salads. A namakhekhe ukunambitheka kanye amaswidi Arabhu akunakwenzeka ukuchaza ngamazwi. On isicelo ibhulakufesi kungenziwa wakhonza ngqo ekamelweni lakho. Njengoba for dinner, it is ngaphambilini ngokuvumelana imenyu.
Inkantini nezindawo zokudlela
Ngaphandle zokudlela main Kheops 4 * Kukhona nezinye izindawo eziningana lapho izikhungo lapho nawe ungadla ukuchitha isikhathi kahle. Ethandwa kakhulu phakathi izivakashi yilona yokudlela a la Carte, okuyinto isebenza kuphela kusihlwa. izicabha zalo avulekele izivakashi at 7 pm futhi injabulo izivakashi 3:00. Ngaphezu kwalokho izitsha kakhulu yizivakashi Ungazama ukuvakashela le ndawo, lapha umculo ingoma yakhe temdzabu Ensemble ejabulisa, ukugcwalisa emkhathini nge amanothi esiyingqayizivele. Ngaphezu kwalokho, i-on-site namaMoor cafe, ephumela kweyesi-2 ntambama futhi egijima kwaze kwaba phakathi kwamabili.
Izivakashi ungavakashela yokudlela kanye cuisine Tunisian, ibha umthamo nesigaxa ZOKUBHUKUDA. It unikeza izitsha ngempela okumnandi, eziningi zazo zenziwa kusukela tuna. Kuyinto ezihlukahlukene izitsha hot, salads. Ngisho ukunikela ngezimpahla nezitini okulungiselelwe ne ukwengeza le nhlanzi. Yini enye kuqashelwe kulezi izitsha, ngakho-ke eziningi izinongo ezahlukene, izinongo kanye zemifino amafutha. I bendabuko green tea isiphuzo nama-alimondi kanye Mint, ehlinzekwa wumnikezeli ne ukwengeza zikaphayini nuts. Akubhekwa esingaphansi ethandwa futhi ikhofi kanye namakha cardamom.
Umthamo ntambama futhi kungaba in Pizzeria. Kubathandi ebusuku amaqembu kanye ema-disco kukhona ibha disco, dancing in esingapheli waze 2 ekuseni.
Beach Hotel Indawo
Kheops Ihhotela 4 * It has siqu zayo eduze endaweni lolwandle. Ukuze uthole kuso, kumele balungise ingadi yezithelo yona isibhekwa ezisawolintshi adlule Bungalow. Sandy beach hotel ohlanzekile ngempela. Kukho konke ezengeziwe yokukhokha enikeziwe ilanga loungers nezambulela. Kumele uthathe ithawula yakho, ngoba kwakungekho ukuba. Nge yokungena elula kolwandle uhlezi eziningi imikhaya nezingane. Ngesikhathi sebehlezi ogwini, izivakashi ngeke be bored. It unikeza ezihlukahlukene zokuzijabulisa ezifana Ukushushuluza amanzi, ukuntweza phezu kwamagagasi, ngomkhumbi. Kukhona "banana" futhi jet eqhweni. Kulabo ujabulele ukuzijabulisa okudliwa ngaphezulu, kungaba kwenziwe ku ride isikebhe ubone ubuhle namathafa ugu. Futhi uma umuntu elambile, ibha beach, kodwa kuphela ehlobo. It ivuliwe kusuka 10 ekuseni kuze 5 ntambama.
Izindleko uhambo ukuhlala kuleli hhotela (ekuqaleni Disemba 2014) 7 nobusuku ababili abadala kuyinto ruble 53 902. Lokhu kuhlanganisa izindleko amathikithi zombili. Izivakashi inikeza igumbi ejwayelekile olulodwa ngaphandle uhlobo oluthile amafasitela. Uma ufuna inombolo efanayo, kodwa umbono kolwandle, intengo tour kuzokhulisa ruble 1200-1300. Wonke amanani for kwemikhono nge HB ukudla.
Kheops 4 Intengo Yemfihlo * Okunqumayo ezindlini ezithokomele futhi has a kwencika kwesizini. Hlala inkathi ongaphakeme, futhi ukubhuka kusengaphambili ungagcina ku izindleko ukuvakasha kanye ukuchitha imali ezincane kakhulu.
Territory, zonke izidingo kanye nemisebenzi
Yini enye engingabuye ezikhangayo Kheops Ihhotela 4 *? Izibuyekezo zezivakashi ukumaka anhlobonhlobo amasevisi ezahlukene. Iphinde inikeza esikhulu yokubhukuda phezu ithala enkulu. Ukuze kube lula izivakashi ilanga loungers nezambulela eceleni kwakhe mahhala. Ngaphandle kwakhe, kukhona zasendlini indawo yokubhukuda.
Kulabo abaye yanquma sihlanganise ukuzithabisa nabo umsebenzi, ukusebenza kahle endlini yomhlangano kanye samabhizinisi. Uma kudingekile, ungasebenzisa inthanethi Wi-Fi. Phakathi kwemisebenzi yezokuthutha kungenziwa kuphawulwe Izimoto eziqashiswayo. Ngosizo imoto eziqashisayo bungatholakala ngomsebenzi hhayi kuphela, kodwa futhi hambo. amasevisi engeziwe zihlanganisa Ilondolo kanye nezakhiwo zamahhovisi ephephile efakwe edilini lomshado.
Abanikazi akazange bayakhohlwa izivakashi kancane. Babuye ifakwe ichibi elincane futhi club yezingane ivuliwe.
Ukuphumula ehhotela, izivakashi ngeke be bored. Kunezindlela eziningana elikhulu imisebenzi ehlukahlukene kanye nokuzijabulisa. Kulabo ukubukela isimo sabo ngokomzimba ngisho ngamaholidi, ejimini. Ngaphandle kwakhe, kukhona izinkantolo tennis, igalofu mini futhi table tennis. A ezihlukahlukene zokuzijabulisa inikeza isikhungo amanzi ezemidlalo. Ngaphezu esebenzayo kakhulu izithombe iqembu. Abavumeli nesithukuthezi, ngokuhlela zonke izinhlobo zokuzijabulisa. Ngokukhethekile ikhokhelwa kuzivakashi abasebasha. Kubo, ngaphezu ezihlukahlukene zokuzijabulisa, ayeba ezithakazelisayo imidlalo mobile. Futhi ukuze uphumule uzizwa ukhululekile bonke abanye, kusihlwa labetibambile umbukiso temdzabu, futhi ebusuku - i-disco.
Futhi bathini mayelana izivakashi uhlale Kheops 4 * (Tunisia)? Izibuyekezo amaholide uqaphele kwasekuqaleni, ukuthi izimo kokuhlala kanye isevisi kulolu ehhotela ngokugcwele ilingane nesibalo zezinkanyezi. Sashiya eziningi okubuyayo ku indawo ehhotela kanye isondele ebhishi. Mina yaqashelwa and ezisawolintshi yezithelo. Mayelana naye ukukhumbula zonke khumbula lwesithathu.
imibono emihle futhi itjheje kakhulu Arabhu cuisine, ngijabulisa izivakashi nge ukwehlukana kwayo futhi ukunambitheka enkulu. A plus wathola nezinombolo imakwe nezimfanelo ezinjengokwethembeka nokuhlanzeka, imfudumalo nenduduzo.
Hhayi ngaphandle izikhalazo. Abasebenzi hotel, nakuba enobungane, kodwa akudingeki ulwazi isiRashiya. Ukuze ukuxhumana abasebenzi, udinga okungenani ulwazi sakugcina ngesiNgisi noma ngesiFulentshi. Ngaphezu kwalokho, akubona bonke abantu okuthandwayo "awayiphazamisi kakhulu" izithombe iqembu ngokuphelele "aluphumeleli."
Noma kunjalo, imibono emihle kakhulu.
Dar El Olf 4 * (Tunisia / Hammamet): incazelo kanye nokubuyekeza
Uric acid egazini. Indima emzimbeni, kanye nezindlela ukulawula
Kirgofa umthetho - imithetho ezingenakuguquleka